च्याम्पियन लिग लिओन विरुद्ध खेलबाट बार्सिलोनाले सिक्यो ३ चिज !! बार्सिलोनामा यस्तो छ प्रभाव - Experience Best News from Nepal
च्याम्पियन लिग लिओन विरुद्ध खेलबाट बार्सिलोनाले सिक्यो ३ चिज !! बार्सिलोनामा यस्तो छ प्रभाव
च्याम्पियन लिग जारी छ भने बार्सिलोनाले लिग-१ बलियो टिम लिओनलाई दोस्रो लेगमा फर्किदा फराकिलो जितसंगै पाखा लगाएको छ। विभिन्न खेलाडीको फर्मलाई लिएर भल्भार्दे चिन्तित देखिएका थिए भने फराकिलो जितसंगै उनले गोलकर्ता मेस्सी, पिके हुदै फर्किएको फर्म देखेर उनले स्वरेज, कौटिन्होलाई समेत पोत्साहन र प्रसंसा गरेका छन्।
बार्सिलोनाको खेलमा ३ ठुला शक्ति मानिने खेलाडी र खेल शैलीमा परिवर्तन आएको र फर्म सुधार भएको पाइन्छ।
१) स्वरेज आफ्नो फर्ममा उज्जल देखिएका छन्:
मेस्सीले हर खेलमा क्रेडिट राम्रो पदर्शनको त्याग प्राप्त गरेका छन् भने फ्रेन्च विरुद्धको खेलमा स्वरेजको पदर्शन निकै उत्कृस्ट भएको देख्न सकिन्छ। पेनाल्टीका हकदार थिए स्वरेज साथै आफ्नो गोल कौटिन्होलाई दिए साथै प्रतिद्वन्दीबाट सुन्दर बल निस्कासन गरे जसले उनको फर्ममा अझै उतिकै निपूर्ण रहेको पाउन सकिन्छ। उक्त खेलमा स्वरेजको गोलको मात्रै कमि थियो तर यूरोपियन लिगमा स्वरेजको गोल कमि भने छैन्।
उनि टिममा रहेको फर्म र कम्ब्याकलाई राम्रो रहेको भनेका छन् संगै स्ट्राइकर भइ गोल गर्नु जरुरी तर गोल त् एक न एक खेलमा भइ नै हाल्नेमा आफु आसावादी रहेको बताउछन। स्वरेजले उच्च तहको यूरोपियन लिगमा गोल गर्नमा असमर्थ छन् तर यही तहको खेलले स्वरेज उचाईमा भने पक्कै फरकपन ल्याउने नै छ।
२) लेंग्लेटको उचाईका निमित अब उमटिटीले लडाई गर्नु पर्नेछ:
सेन्ट्रल डिफेन्सका रुपमा लेंग्लेट फ्रेन्च विरुद्धको खेलमा उत्रिएका थिए तर चोटबाट फर्किएका उमटिटीलाई भने उनको स्थानमा फेरबदल गरियन। भल्भार्देको प्रमुख रोजाई बन्दै छन् लेंग्लेट भने उनि बार्सिलोनाका डिफेन्समा पिकेसंगै मुटु बनिसकेका छन्। पहिलो हाफमा मौसा डेम्बेलेको प्रयासलाई सानदार विफल पार्न लेंग्लेट सफल भएका थिए। तर पूर्ण उच्च खेलको दोस्रो हाफमा फेकिरको प्रयास रोक्दा उनले पहेलो कार्ड प्राप्त गरे।
उमटिटी पूर्ण चोट मुक्त भएका थिए भने उनको ११ मा पर्ने सम्भावना उक्त खेलमा निकै उच्च थियो तर लेंग्लेटको फर्मले गर्दा उनि विकल्पमा परे।
३) कौटिन्होको पदर्शनले केहि राहत:
कौटिन्होलाई डेम्बेलेको चोटका कारणमा मैदानमा उतारियो भने अक्टोबर पश्चात कौटिन्होले पहिलो च्याम्पियन लिग गोल समेत गरे। खेलमा पूर्ण रुपमा स्वरेज र मेस्सीसंग समन्व गरेका कौटिन्हो बार्सिलोनाका निमित राम्रो पदर्शनमा फर्किने आसा देखियो। उनले आफ्नो खेल महिनौ देखि खराब रहेकोमा स्वीकार समेत गरे।
तर उक्त खेलमा कौटिन्होलाई खेल सकिनु २५ मिनेट अगाबै निकालियो र पुन डेम्बेलेलाई स्थान दिइयो, पुन बार्सिलोनाले ३ गोल गर्न सफल भयो।
डेम्बेले पुन चोट ग्रस्त छन् मतलब डेम्बेले २देखि ३ हप्ता मैदान बाहिर हुने छन् फलत कौटिन्होको सम्भावना खेलमा फर्किने सम्भावना बढी छ।
मेस्सीको शानदार गोल संगै एलिना र डेभिड भिल्लाले गरे मेस्सीको प्रशंसा !!
मेस्सीले फुटबललाई गुरुत्व दिएका छन्: क्लासिको प्रेरणामा लेंग्लेट र बार्सिलोनाको हेराई ‘लिडर’मा
च्याम्पियन लिग देखि यी ४ तत्व मिलाउन भल्भार्डेले बनाउदै छन् बार्सिलोनाको गुरु योजना
संसार भर मेस्सीको गोलको चर्चा !! यस्तो थियो उनले गरेको गोल (भिडियो ) हेर्नुहोस्